WAXYAALLAHA KALARKA: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA, SIFOOYINKA FAA'IIDO IYO KHILAAFAADKA, SIDA LOO ISTICMAALO UJEEDOOYINKA DAAWOOYINKA - SOOSAARKA DALAGGA
Kalluumaysiga: waa maxay faa'iido leh, waxa muxuu yahay, sida loo soo saaro oo loo daboolo
Ku saabsan sifooyinka faa'iidada leh ee abuurka ubaxa ayaa muddo dheer loo yaqaan dad badan, gaar ahaan dadka qaba dhibaatooyinka leh mareenka caloosha iyo mindhicirka. Decoction A miraha kuwan leeyahay hanti dabiici ah iyo daboolaya qurxinta in si cajiib leh u dhammaystirto daaweynta daroogada iyo fuliyaan hawl ilaalinta ah sida wakiilka prophylactic ah. Waxaan isku deyi doonnaa in aan falanqeyno qaabka kiimikada ee kiriimyada kalluunka iyo saameynta ay ku yeelanayaan hababka jirka iyo dhammaan qaybta noolaha oo dhan, iyo sidoo kale in la tilmaamo qodobbada muhiimka ah ee isticmaalka daaweynta.
Halabuurka hodanka ah ee ka soo baxa ubaxa
Waxa xiiso leh, halabuurka kiimikada ee kiriimyada xayawaanka ah ayaa la mid ah qiyaasta kiimikada ee nuts, halkii aan u adeegsan jirnay iskuxirnaanta, badanaa sababtoo ah content dufanka - 42% wadarta guud. Qaadadu waxay sameeyaan 18.5%, iyo carbohydrates - 28.5%. Dabcan, qadarka noocaas ah ee dufanka, kalooriga ku jira sheyga ayaa sidoo kale aad u sarreeya oo qiyaastii 534 kcal / 100 g, laakiin waa inaadan ka walwalin shaxanka waana ugu yaraan labo sababood tan.
Sababta Sababta 1.
28.7% dhammaan dufanka waxay hoos u dhaceen omega-3 iyo omega-6 fatty acids, taas oo saliidda kalluunka ay sidoo kale hodan tahay, taas oo ay sababteedu tahay ta dheer ee nafaqada ah ee dheeraadka ah, gaar ahaan cuntada carruurta.
28.8% - acid linolenic waa saliid asaasi ah oo muhiim ah, qaybta ugu muhiimsan ee xuubka unugta aadanaha iyo xayawaanka.
7.9% - oleic acid (omega-9).
Sababta jawaabta 2aad. Dhibaato mar walbaa waa inaad cuntaa 100 garaam oo ah geedka xayawaanka hal maalin.
Baro naftaada faa'iido leh ee saliidda kalluunka.
Vitamiin ee kooxda B, sida: B1, B2, B4, B5, B6, B9. Sida caadiga ah, qofku wuxuu helaa fiitamiinadaas cuntooyinka kale, tusaale ahaan B6 waxaa laga helaa jaakadaha ukunta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, iyo miro cusub (strawberries), B2 - rootiga cad, hilibka iyo beerka, taas oo ah sababta ay nafaqadu ugu adkeysaneyso cunto kala duwan. Faa'iidada ugu weyn ee kalluunka ayaa ah in ay tahay dabeecada dabiiciga ah ee fiitamiinada, qadar yar oo kaas oo jimicsiga jirka ku daraya walaxyo badan oo muhiim ah.
Nitrotinic acid ama fitamiin PP. Wuxuu caawiyaa burburinta dufanka, borotiinka iyo carbohydrateska, sii daaya tamarta. Dhibaato la'aanta jidhku waxay keeni kartaa xanuunka dheef-shiid kiimikaadka.
Vitamin E. Waxay lagama maarmaan u tahay biosynthesis of erythrocytes iyo borotiinada, ku lug leh dheef-shiid kiimikaadka heerka.
Faytamiin C. Antioxidant, wuxuu leeyahay saameyn xasaasiyadeed oo xooggan oo ku saabsan hababka casriga ah ee jirka, sidoo kale wuxuu muhiim u yahay horumarka caadiga ah ee lafta iyo unugyada isku xira. Waxaa mahad leh guryahaas oo cabba cabitaanka fitamiinkani waa dhaqameed xilliga hargabka.
Faytamiin K. Asaasiga ah ee loogu talagalay iskudhafka borotiinka iyo xinjirowga dhiigga. Haddii uusan ka qaybqaadan, waa suurtogal in la qaybiyo unugyada qaar ee wadnaha iyo kelyaha. Sidoo kale ku lug leh nuugista potassium.
Ma taqaanaa? Masar hore iyo dunida qadiimka ahba, ayaa waxaa loo tixgeliyaa mudnaanta sharafnimada, Ruushka waxay dhar xidheen dharka dharka leh, iyada oo aan loo eegin fasalka qaarkood.
Potassium, calcium, magnesium, sodium, fosfooraska - waxyaabaha muhiimka ah ee loogu talagalay dhisidda xayawaanka kaarboon ee jirka.
Iron, manganese, zinc, selenium, copper ayaa muhiim u ah ficilka galmada iyo habdhiska galmada caadiga ah, sameynta nurotransmitters, caabbinta jidhka oo wanaagsan iyo shaqada caadiga ah ee qanjirada indhaha.
Waa maxay faa'iido iyo waxa loola dhaqmo
Sida cunnooyinka kale ee nafaqada, miraha qalalan waxay leeyihiin saameyn faa'iido leh jirka, ugu horreyntii, iyada oo la kulmaysa maaddooyinka lagama maarmaanka ah, taas oo aan helno wax yar sababtoo ah cunto cunno aan kala go 'lahayn, ama aan lumino sababtoo ah nisbada ugu sareysa ee nolosha iyo nasasho la'aan. Iyada oo ku xidhan dhibaatada loo baahan yahay in la xalliyo, geedka dabiiciga ah ayaa la diyaariyey oo siyaabo kala duwan ayuu u wada baaba'ay. Aynu aragnay dhibaatooyinka ka timaadda kiriimka ee ka caawin kara in laga takhaluso, iyo qaabkee ah waa in lagu qaado kiis gaar ah.
Ma taqaanaa? Dharka dharka leh wuxuu leeyahay bactericidal iyo antifungal. Daraasaduhu waxay muujiyeen in dhaska fangaska aysan ku noolaanaynin unugyadaas, iyo bakteeriyadu ma sameysaan deegaanno. Mid ka mid ah caddaynta ugu xoogan waa mugdiga Fircooniga: faashadaha ku duubay maydka meydka ayaa laga sameeyay qoryo.
Xasaanadda waxaa lagu xoojiyaa iyada oo loo marayo saameyn culus oo ku saabsan dhammaan qaababka jirka: tan waxaa ka mid ah saamaynta antioxidant iyo xasilinta nidaamyada dheef-shiid kiimikaadka heerarka gacanta.
Faytamiin C, oo ah qayb ka mid ah abuurka, waxay ka caawisaa sidii ay ula qabsan lahayd xoriyada bilaashka ah, halka fitamiin B iyo asiidhyada asaasiga ah ee asaasiga ah ay leeyihiin saamayn guud oo xoojiya.
Jelly roodhiga, geedka yaryar, yaxa, safflower, amaranth kor u kacay, lebpermint, perga, cornel, blackberry, Crimean zheleznitsa, bocorka iyo viburnum sidoo kale gacan ka geystaan ​​kordhinta difaac.
Habka loo isticmaalo. Abuurka kaneecada waxaa lagu qaadi karaa nooc kasta: dhammaan, jajabiyey, qaab decoction ama faleebo. Si looga hortago qof qaangaar ah, waa ku filan in la cuno 1-2 qaado oo shinni ah (jajabiyey ama dhan) 2 jeer maalintii cuntada. Seeds ayaa lagu dari karaa firileyda iyo siriyaalka, ama si fudud u isticmaal "dawo ahaan", cabbitaanka biyaha.
Saamaynta faa'iido ee abuurka kaxda ee cudurrada wadnaha iyo xididada waxaa lagu sharaxay dhowr waxyaabo nafaqo leh:
dufanka neefta waxay caawiyaan inay dhuubaan dhiigga iyo cadaadiska dhiigga ee hooseeya, la dagaallamaan "xun" kolestaroolka;
Potassium iyo magnesium ku jira abuurka ayaa si toos ah ugu lug leh xakameynta qandhada wadnaha.
Intaa waxaa sii dheer, abuurka kalluunka, buurta arnica, hellebore, oregano, gaas, caraway, colza, roodhiga lacagta, rokambool, qaraha, qoyaanka, oxalis, kalendula iyo burcadka ayaa sidoo kale saameyn togan ku leh xaaladda habka wadnaha iyo xididada.
Habka loo isticmaalo. Daaweynta iyo ka-hortagga kardiomyopathy, hypertension, varicose xididada iyo cudurrada kale ee nidaamka wadnaha, isticmaal 10-ka miraha miraha waxaa lagu shubay galaas biyo ah heerkulka qolka waxayna tagtay 2-3 saacadood. Wakhtiga ka dib, faleebo ayaa diyaar u ah isticmaalka. Qaado daawada ilaa nus saac ka hor cuntada iyo ka hor wakhtiga jiifka.
Wixii mareenka caloosha iyo mindhicirka
Inkasta oo faa'iidooyinka adag ee abuurka daxda, daaweyntan ayaa si fiican loogu yaqaanaa saamaynta ay ku leedahay mareenka caloosha iyo mindhicirka. Nidaamka dheef-shiid kiimikaadka ayaa siinaya jawaab celin deg-deg ah oo ku saabsan qaabka loo yaqaan 'decompression' ee abuurka leh xanuunka caloosha, caloosha, xakameynta mindhicirka.
Wixii daaweynta cudurrada mareenka caloosha ayaa sidoo kale isticmaala cawska qoyan, caleemo, basbaas, jaalaha cad, cinwaanka cad, kaluunka, kalanchoe, lupus, princess, caruur iyo celandine.
Dhibaatooyinka caloosha sida gumaaciska ama nabaad-guurka, waxaa lagu talinayaa in la qaato decoction ah oo ah miraha kaynta. Daroogadu waxay noqotaa mid aan fiicneyn oo aan fiicneyn muuqaalka, laakiin dhexdhexaad ah, dhadhan la'aan, oo aan lahayn ur adag.
Habka loo isticmaalo. 2 tsp. miraha ku shub 300 ml oo biyo ah karkaraya iyo karkari kuleyl dhexdhexaad ah 10-15 daqiiqo, oo si xoog leh u walaaqaya wax kasta oo 3 daqiiqo ah. Markaas maraq waa laga soocaa kulaylka iyo mar kale si xoog leh loo ruxay, si ay abuurka u siiyo nafaqooyin wanaagsan. Marka xigta, wakiilka ayaa ka tagay heerkulka qolka, ka dibna waxaa la qaadaa 50 daqiiqo cuntada ka hor cunto kasta.
Waa muhiim! Dib-u-samaynta abuurka ubaxa ayaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha ilaa ugu badnaan 2 maalmood. Sidaa darteed, waa in aan lagu kaydin stock ah, cusub waa had iyo jeer ka fiican.
Noocyada qulqulka ayaa leh hanti batarin ah, sidaas darteed waxay faa'iido u leeyihiin dhacdooyinka joogtada ah ee beerka, xameetida iyo xajmiga beerka.
Habka loo isticmaalo colic. In litir biyo ah karkaraya, ku shub 1/3 koob oo ah miraha oo isku kari ilaa kuleyl aad u hooseeya 2 saacadood. Ka dibna ka soo saar maraq ka soo kulaylka, qabow iyo cadaadis iyada oo cheesecloth. Tani macnaheedu waa qaadashada hal dhalo 2-3 jeer maalintii, laakiin waa inaad bilowdaa qadar yar, tusaale ahaan, 1/2 koob.
Haddii aysan jirin wax falcelin ah, sida xasaasiyadda ama lallabada, ayaa lagu arkay, qiyaasta ayaa si tartiib tartiib ah loogu kordhin karaa hal koob.
Wixii nidaamka jimicsiga
Nafteeda, miraha kiriimka ah ma saameynayaan geedi socodka neefsiga ee habka urojinimada. Warshadu ma leh saameyn antifungal ama antibakterial, sidaa daraadeed looma qeexi karo daawo madaxbannaan, laakiin waxaa loo isticmaali karaa sida daaweynta ka hortagga nabarrada.
Habka loo isticmaalo. Si aad u bilowdo diyaarinta decoction diirimaad ah heerka of 1 tbsp. qaaddo 150 ml biyo karkaraya. Isku dar maaddooyinka oo u karkari 2-3 daqiiqadood, kadibna ka qaad dabka iyo 10 daqiiqo. si xoog leh ugu rux weel weel leh, tusaale ahaan, awood. Ka dib marka miraha ka baxo xabeeb, qalabka waxaa lagu sifeeyaa faashad iyo qaadashada 1 tbsp. qaaddo 3-4 jeer maalintii muddo 20 daqiiqo ah. ka hor cuntada.
Wixii nidaamka dareenka
Doorka muhiimka ah ee isugeynta caadiga ah ee calaamadaha korantada ee neuronka ilaa neuron waxaa lagu ciyaaraa magnesium, taas oo hodan ku ah xayawaanka. Magnesium wuxuu ka caawiyaa hagaajinta xasuusta, iyo sidoo kale kor u qaadida awoodda barashada qofka. Waxay ka caawisaa inay la qabsato diiqada iyadoo la joojinayo sii deynta walxaha hormoonka - cortisol - dhiigga.
Habka loo isticmaalo. Si loo saxo dhaqdhaqaaqa habdhiska dareenka, kalluunka waxaa loo qaadan karaa qaab kasta, laakiin waxa uu noqon karaa mid aad u qurux badan oo ah qaabka burka dufanka ah ama miraha oo dhan lagu daro boorash, jiis ama caano kale. Adigoo isticmaalaya miraha foomka qalalan, waxaad heleysaa gunno dheeraad ah qaabka caadiga ah ee xawliga.
Wixii aragti ah
Haddii aan helno omega-6 iyo omega-9 cuntooyinkaas oo kale sida hilibka, ukunta, rootiga, rootiga, ka dibna ilaha ugu muhiimsan ee omega-3 waa kalluunka cas, maqaarka, qashinka iyo badeecooyinka kale ee aan marwalba joogin cuntada.
Maxaan nidhaahnaa, kalluunka qaar ma jecla banjiga. Kuwani waa sababaha yaraanta u soo baxa marka loo eego omega-3, iyo astaankani waxa ay faragelisaa isbedelka luteumka iyo retina.
Habka loo isticmaalo. Si looga hortago dhibaatooyinka aragga, xayawaanku waxaa loo isticmaali karaa si la mid ah nidaamka dareenka, ama waxaad isticmaali kartaa saliideedka qalabka, adoo ku daray cuntada halkii saliida gabbaldayaha (laakiin maaha inta lagu jiro shiil!). Saliideedka qaxwaha ayaa la cuni karaa si madaxbannaan iyo shaaha ka hor inta aan la cunin subaxdii, laakiin doorashadani maahan mid ku habboon dadka qaba dhibaatooyinka beeryarada.
Maqaarka iyo timaha
Isticmaalka ugu ballaaran ee miraha gabbaldayaha iyo saliidda xiirta ah ee laga helo kondomoolka. Cuntada Faytamiin iyo tiro ka mid ah asiidh dufan ah oo loogu talagalay naasku waxa uu u baahan yahay in xayawaan aan loo baahnayn haweenka quruxda badan iyo caafimaadka. Sidoo kale:
Faytamiin K waxay cadeyneysaa maqaarka waxayna ka hortagtaa muuqaalka suufka;
Faytamiin B3 wuxuu hagaajiyaa maqaarka maqaarka waxayna ka hortagtaa samaynta laalabka;
Faytamiin B1 waxay caadi u tahay dheef-shiid kiimikaad iyo guud ahaanba, tan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa fitamiin dhalinyaro ah;
Iyada oo qayb ka ah maskooyinka, saliidda shimbiraha ayaa quudisa timaha timaha, dhererka iyo jilicsan dusha sare ee timaha.
Habka loo isticmaalo. Seeds ama burka laga soo qaado ayaa loo isticmaali karaa sida cuntada lagu daro, oo kaliya marka la cuno 1-2 qaado shandad ama cunto kefir ah.
Daryeelka timaha, kondomka guriga lagu sameeyo ayaa sidoo kale isticmaala cabitaanka, rootiyada, basasha goosashada, marabax, qallalan, chard, bergamot iyo nasturtium.
Qodobka ugu fudud ee maskada timaha ku salaysan saliidda qalalan: ku dar 6 ilaa 5 dhibcood oo saliid ah oo ah boomaato timo caadi ah, ama haddii aad ka cabsaneysid inaad timo aad u dhalaaliso, waxaad dalban kartaa qadar yar oo ah saliid saafi ah xagga timaha dhinacyadiisa, ka dibna ku qallaji dharka timo.
Marka faleebada loo yaqaan 'flax' loo yaqaan 'macnaheedu yahay miisaanka lumista, laba shey ayaa looga jeedaa:
Cellulose iyo xab qarsoodi ah oo ay ka kooban tahay abuurka ayaa ka caawiya in la nadiifiyo mindhicirada sunta iyo saxarada saxda ah.
Nikotinic acid, oo ah qayb ka mid ah abuurka, ayaa si firfircoon uga qayb qaata burburka dufanka.
Taasi waa, aaladda lafteedu ma aha gubi kariye, laakiin iyada oo caadiyan la marin hababka dheef-shiid kiimikaad ee jirka, kaas oo dadka miisaankoodu badanaa mar walba naafo yahay, waxay caawisaa in lumiso miisaanka. Haddii aad raacdo talooyinka, miisaanka bil kasta wuxuu noqon karaa 2 ilaa 3 kg.
Habka loo isticmaalo. Waxaa fiican inaad isticmaasho dhogorka kalluunka ama miraha dhulka subaxdii ka hor cuntada (ama wakhtiyada cuntada) iyo halkii casho dambe ah, oo ay weheliso kefir. Si aad u bilowdo, hal mar qaadashada waa in aan ka badnayn 1 tbsp. malqacadaha, iyo maalin walba - wax ka badan 50 g maalintii. Markaad taabato dareeraha ama cabitaanka miirista, geedka barafka, sidaas darteed rafcaanka dareenka foorjiga muddo dheer.
Sida loo doorto qalabka duugsan marka la iibsanayo
Miro-yaraanta waxay leedahay hal faa'iido oo keliya miraha oo dhan - waxay diyaar u yihiin inay wax cunaan. Dhinaca kale, miraha oo dhan:
haysta nolol shelf dheer;
ilaaliyo asiidh dufan ah oo ka kooban oxideed (tan iyo qolofadu uma oggolaanayso hawada);
ku habboon diyaarinta decoctions iyo infusions, halka kuwa dhulka ku waxaa loo isticmaalaa oo keliya foomka qalalan.
Waxa la raadinayo markaad dooranayso abuur. Si aad u hesho faa'iidada ugu badan ee sheyga, iyo in aadan daawada u shubin sun, waxaa muhiim ah in la doorto badeecad tayo leh oo cusub oo caafimaad leh intii suurtagal ah.
Marka, marka aad dooranayso abuurka waxaad u baahan tahay inaad ilaawo:
Fiiri taariikhda xidhmada. Baakadaha wax soo saarka ayaa kuu fududeyn doona inaad doorato, isku day inaad ka hesho badeecada ugu dambeyntii la sii daayo.
Hubi qoyaanka. Marka aysan suurtogal ahayn in la go'aamiyo urta ama wax-qabadka, haddii miraha ay qoyaan ama aysan ahayn, fiiro gaar ah u socodka. Jeex jeex jeex ah waa mid aad u siman, iyo miro waa in uusan sameysan buro. Haddii kale, waxay tilmaamaysaa joogitaanka caaryada ama cayayaanka.
Sidee loo tiriyaa abuurka
Dhammaan waxay ku xiran tahay qiyaasta bran aad rabto inaad hesho. Haddii ay tahay xayawaan-bureed - isticmaal bacda qaxwada, khafiifinta qulqulaya ayaa siin doona blender. Dabcan, waxaa jira fursado ah in lagu daro macdanta hoobiye.
Laakiin habkani waa waqtiga ugu badan ee waxtarka leh, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad hesho sir badan, saliid fiican, oo ku habboon soo saaridda decoctions. Nidaam xiiso leh oo la jiidanayo adigoo isticmaalaya pin ah wareega iyo faashad.
Faafidda faashad ku saabsan gudida jarjarista si looga fogaado waxyeelaynta miisaanka.
Daadi abuurka lakabka khafiifka ah ee ka baxsan faashadda oo ku dabool qaybta labaad ee korka.
Iyada oo ay jirto dadaal, u soco boodhka isdabajoogga ee ku aaddan abuurka, iyaga oo ku xoqaya si joogta ah.
Uruuri kareemka oo ku shub weel gaar ah.
Waa muhiim! Noocyada duurjoogta ah, sida lafaha koolada, waa muhiim in la kaydiyo iyada oo aan la helin hawo, taniyo asiidh dufan ah oo ka samaysan abuurka si sahlan ayaa loo ogaadaa oo la helaa qadhaadh..
Waxaa ugu wanaagsan in alaabta lagu keydiyo weel dhalada ah ama bac ah bac ah. Weel shinni ah ayaa lagu ridi karaa godad ama meel kale oo mugdi ah, boorso balaastig ah ayaa lagu ridi karaa qaboojiyaha ama baalkiga inta lagu jiro xilliga qaboobaha, markaa waxaad ka badbaadin doontaa sahayda ka imaan karta boogaha.
Yaa aan la isticmaali karin
Sida wakiil kasta oo bayoloji firfircoon, abuurka xoqan ayaa leh iska horimaad u gaar ah. Hore ayaan uga hadalnay cidda ay ku fiicantahay; bal aynu eegno kiisaska marka kalluunka uu ka hor istaago:
saddexda bilood ee ugu horeeya uurka. Inta lagu jiro muddadan, jidhka haweenku waxa uu ku jiraa isbeddel wayn: Hormoonka asaasiga ah waa mid dhib badan, nidaamyada oo dhan waxay bartaan inay ku shaqeeyaan qaab cusub, sidaas darteedna waxay dareemaan cadaadis iyo cidhiidhi. Inta lagu jiro muddadan, waa wax aan loo baahnayn in lagu soo bandhigo wax cusub ama keena fal-celin la taaban karo oo ku saabsan jiritaanka cuntada;
endometritis, polycystic ama fibroma uterine;
cirrhosis ee beerka. Flax wuxuu leeyahay saameyn ba'an oo wuxuu noqon karaa mid aad u faa'iido badan oo ka mid ah duruufaha iyo colka cagaarshowga, laakiin haddii hawlaha beerka ay aad u liidaan isbeddellada isbeddelka, is-daaweyntu waxay u badantahay inay waxyeello ka soo gaarto faa'idada;
ka sii darista cudurrada daba dheeraatay (xanuunka 'pancreatitis', cholecystitis, colitis);
ragga qaba kansarka qanjirka 'prostate' (alfa-linolenic acid waa dhibaato);
dulqaad shakhsi ah. Haddii xaaladdu ay sii xumaato muuqaalka kalluunka ee cuntada, tani waa calaamad joojineysa qaadashada.
Waa muhiim! Inta badan maalmaha ugu horreeya ee qaadashada miraha waxay la kulmaan dhibaatooyin sida cirridka, saxarada dabacsan ama gogosha caloosha - tani waxay u badan tahay in la qabsashada unugyada loo soo saaro alaab cusub. Waxaa muhiim ah in la kala saaro jawaab-celinta ugu horreysa ee mudada gaaban ee jirrada muddada dheer.
Waxaan rajeyneynaa inaad heshay macluumaadkan waxtar leh. Iska ilaali caafimaadkaaga, ha ka qoomameynin wakhtiga diyaarinta cuntada tayada sare leh, nasasho iyo dadka wanaagsan, sababtoo ah niyadda wanaagsan ayaa mararka qaar ka bogsata daawooyinka kale.